Hinge Patent, 1985, Inventor Geoff Fenton
သေတ္တာများ၊ ထိပ်တန်း ဦး ထုပ်များ၊ MAGNABEND ဖြင့် ETCS ပြောင်းပြန်ပြောင်းသည်
သင့်ရဲ့ MAGNABEND ထဲကပိုရယူ
slot slugbar လုပ်နည်း
sloted clampbar ကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း“ အောက်ပါစာမျက်နှာကို http://aaybee.com.au/Magnabend/Magnabend_Homepage.html” မှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ Magnabend ဝဘ်ဆိုက်ပစ္စည်းအသုံးပြုခွင့်ကို Alan Stuart Bottomley အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ The Slotted Clampbar (ပုံ၏ပုံကိုနှိပ်ပါ။
တစ် ဦး MAGNABEND တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လို
19-05-17 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
တစ်ဦးက MAGNABEND တည်ဆောက်ပုံ?
သည် "Magnabend" လျှပ်စစ်သံလိုက်စာရွက်သတ္တုခေါက်စက်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အမြားရှိသည်သောအမျိုးမျိုးသောအခြားစာမျက်နှာများတွင်မှလင့်များ။ www.jdcbend.com လင့်ခ်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သံလိုက်စာရွက်သတ္တုဘရိတ်ဆောကျဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုအချို့သောအကြံပေးစစ်ဆေးပါ။ အလန်စတူးဝပ် Bottomley (ထို magnabend '' ရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည် ...
19-04-04 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
အဘယ်ကြောင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဘရိတ်ကိုခေါ်သလဲ? ဒါဟာအဲဒီလောက် Benson မေးခွန်း BY စကားများဇစ်မြစ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်: အဘယ်ကြောင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဘရိတ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဘရိတ်ကိုခေါ်သလဲ? အဘယ်ကြောင့်မစာရွက်သတ္တု bender တစ်ခုသို့မဟုတ်သတ္တုဟောင်းတဦး, ဒါကြောင့်စက်မှုဘရိတ်အပေါ်အဟောင်း flywheel နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါသလား အဆိုပါ flywheel, ကားတစ်စီးပေါ်တူတစ်ဘရိတ်, ရှိခဲ့ပါတယ် ...